Zimbabwe Coach Faces Uncertain Future After Warriors' COSAFA Exit - allAfrica.com
Pressure continues to mount on Zimbabwe national football team coach Zdravko Logarusic after his Warriors were eliminated from the COSAFA Cup competition following a 2-1 loss to Senegal in their final Group B encounter played at the Nelson Mandela Bay Stadium in South Africa. Logarusic, whose record is awful, with one win in 11 matches since his appointment in 2019, has however blamed players' fatigue for the defeat.
The Herald, 14 July 2021
Former Zimbabwe international, George Mbwando, feels there are lessons which ZIFA should pick from countries like Italy when it comes to national team appointments. The Azzurri,… Read more »
The Warriors hit a new low under Zdravko Logarusic when their six-year unbeaten record at COSAFA Cup went up in smoke at the hands of Namibia yesterday at the Nelson Mandela Bay. Read more »
Zimbabwe: Warriors Going Nowhere Under Logarusic
The Herald, 13 July 2021
To axe or not to axe is the question. Read more »
Zimbabwe: Warriors Crash Out of Cosafa Cup
ZIMBABWE crashed out of the COSAFA Cup this afternoon after they lost 2-1 to Senegal at the Nelson Mandela Bay in Port Elizabeth, South Africa. Read more »
Zimbabwe: Warriors Coach Logarusic Blames Fatigue for Dismal Show
Under-fire Warriors coach, Zdravko Logarusic, says a combination of fatigue and blunders cost his team as they crashed out of the COSAFA Cup yesterday. Read more »
Zimbabwe: 'Send Coach Logarusic On Loan to San Marino'
Zdaravko Logarusic has six months left of his two-year contract and the time has probably come for ZIFA to end this madness of keeping this Croatian Comedian as the head coach of… Read more »